काकेशियन शेफर्ड कुकुर: विशेषताहरू, उत्पत्ति र हेरचाह जान्नुहोस् विश्व कुकुरहरु
काकेशियन शेफर्ड कुकुर
सबै कुकुर जातकाको विशिष्टता हुन्छ। शारीरिक र मनोवैज्ञानिक विशेषताहरू उनीहरूको आनुवंशिक विकास र कार्यको लागि प्रयोग गरिएको छ जसको लागि उनीहरू प्रयोग गरिएको छ। को काकेशियान शेफर्ड कुकुर मूल हो, जसको नामले ककेसस क्षेत्रबाट आएको हो.
वातावरणीय अवस्थाको कारण कम कोटिसबाट जोगाउन कोट विकसित गरेको छ र सबैभन्दा साधारण चोटपटकहरू तपाईको हर्डिंग ट्रेडबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ। यसको शारीरिक रंग धेरै बलियो छ र यो अवस्थित सबैभन्दा ठूला कुकुरहरू मध्ये एक हो।
यद्यपि समान प्रकारका सुविधाहरू सहित काकेशियन कुकुरहरूका विभिन्न प्रकारका जातीहरू छन् केवल एक जातलाई काकेशियन शेफर्डको नामले चिनिन्छ।
रूसी केनेल क्लब रूसी अनुवाद प्रयोग गर्न रुचाउँछन् भेडडग ओभचारका, एक नामको साथ यो जात पनि पश्चिमी क्षेत्रमा लोकप्रिय भएको छ। काकेशियन शेफर्ड रूसी शेफर्ड्सको प्रसिद्ध तिक्तको हिस्सा हो जुन दक्षिण रूसी शेफर्ड र मध्य एशियाई शेफर्ड भनेर चिनिन्छ।
यो अनौंठो कुकुरको उत्पत्ति अझै केहि अनिश्चित छ र यो एक अफवाह मात्र हो कि जातको उत्पत्ति तिब्बती मास्टिफ कुकुरमा मानिन्छ। के निर्विवाद छ कि यो एक लामो समय को लागी प्रयोग भएको छ झुण्ड राख्ने र भेडडग यसको अविश्वसनीय उपस्थिति, शक्ति र कम तापमान प्रतिरोधको लागि धन्यवाद।
पश्चिमी कुकुर शोमा नस्लको पहिलो आधिकारिक उपस्थिति जर्मनीमा १ 30 .० को दशकको हो। सत्य यो हो यो उल्लेखनीय प्रजाति हो अनुपम सुविधाहरूको। निश्चित रूपमा यसको उत्पत्ति कठिन जीवनयापन भएको क्षेत्रबाट हो, एक पक्ष जसले त्यस जातको विशेष आनुवंशिक विकासलाई अनुमति दिन्छ।
यस कुकुरको टोकाइराइन संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली मध्ये एक हो। यो महान उपकरण तपाईंको लागि धेरै उपयोगी छ अविश्वसनीय सुरक्षात्मक चरित्र र निर्धारित स्वभाव.
यो निश्चित रूपमा सबै खाली ठाउँहरू र कुनै पनि प्रकारको मालिकको लागि कुनै पाल्तु जनावर होईन। व्यक्ति जो यस कुकुरको नस्लको प्रजनन गर्ने निर्णय गर्छन् उनीहरूको बारेमा धेरै राम्ररी जानकारी हुनुपर्दछ सुविधाहरू, हेरचाह र आवश्यकताहरू। यदि तपाईं आफैंलाई सही शिक्षा दिनुहुन्छ भने तपाईंसँग एक विश्वासयोग्य र सुरक्षात्मक कम्पनी हुनेछ।
काकेशियन शेफर्ड कुकुरहरूको शारीरिक उपस्थितिको सन्दर्भमा यदि उनीहरू सही रूपमा हुर्केका छन् भने तिनीहरू स्वस्थ र दीर्घायु हुन्छन्। तिनीहरूको शारीरिक र Regarding्गको बारेमा, उनीहरूसँग कडा हड्डी र मांसपेशी शरीरहरू छन्।
नाक र नाक संक्षिप्त छन्, यसको कानहरु त्रिकोणीय छन् र पक्षहरुमा लुकिएको छ र वर्तमानमा यसको कान काट्न निषेध गरिएको छ। यी घरपालुवा जनावरहरूको टाउको ठूलो छ.
तिनीहरू विशाल कुकुर मानिन्छ रूपमा, यो मान्नु पर्छ कि यी कुकुरहरु को आकार काफी विचारणीय छ। उचाईको सन्दर्भमा, औसत c० सेन्टिमिटर छ। यद्यपि त्यहाँ पुरुष र पोथी बीच भिन्नता छ।
पुरुषहरूको लागि न्यूनतम उचाइ 65 62 सेन्टीमिटर र महिलाको लागि XNUMX२ छ अधिकतम उचाई को रूप मा, कुनै निर्धारित सीमा छ। नर ठूलो छ र 75 70 सेन्टिमिटर र महिला XNUMX० सम्म नाप्न सक्छ।
तिनीहरूको अविश्वसनीय शक्ति र Musculature को कारण, काकेशियन कुकुरहरू धेरै भारी छन्। महिलाहरूले साढे पचास किलो भन्दा बढी तर तर पुरुषहरु kil० किलो तौल गर्न सक्छन् र 70 ० सम्म पुग्न सक्छ। तौलको सन्दर्भमा, नस्लको यौन अस्पष्टता प्रस्ट छ।
कोटको सन्दर्भमा त्यहाँ तीन प्रकारका छन्, लामो, छोटो र मध्यम कपाल। सबै तीन प्रकारका लागि कपाल बाक्लो र चिल्लो हुन्छ। तिनीहरूसँग फिक्का रंगको ऊन कोट कोट हुन्छ जुन चिसो मौसममा उनीहरूको रक्षा गर्दछ।
जातको फरक र colored्गीन फर हुन्छ तर लम्बा भुँडी भएको खरानी र सेतो दागहरू मात्र प्रतिस्पर्धामा अनुमति छ। त्यहाँ कालो र ofका नमूनाहरू र आगो र चेस्टनट टोनका स्पटहरू पनि छन्।
मालिकहरूले यस पक्षको ज्ञान मौलिक छ र समारोहको कारण जुन यो कुकुरले शताब्दीयौंसम्म पशुधनको रक्षा र मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छ, यसमा एक नेताको जन्मजात गुणहरू छन्। त्यस कारणका लागि, यसको मालिकले आफैलाई प्याकको नेताको रूपमा स्थिति दिनुपर्दछ अल्फा बन्ने र यसको लागि तपाइँसँग ज्ञान हुनुपर्दछ।
एक अनुभवहीन मालिकको लागि, पाल्तु जनावर हुर्काउन गाह्रो कुरा हुनेछ, किनकि मालिकले जनावरमाथि नियन्त्रण देखाउँदै आदर र आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। यदि यो प्रभावकारी रूपमा हुन्छ एक अटुट बन्धन मालिक र घरपालुवा जनावर बीच सिर्जना गरिनेछ.
यद्यपि यो प्रभावकारी रूपमा देखा पर्दछ, यो ज्ञात हुनुपर्दछ कि काकेशियन शेफर्ड एक जनावर हो जो दृढ स्वाभाविक हुन्छ र यदि ऊ वा उसको परिवारलाई जोखिममा राखिएको छ भने, उसले आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्न आवश्यक ठान्ने कार्य गर्दछ।
यस कारणका लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि ती मानिसहरू जो पशुसँग सम्बन्धित छैनन् तिनीहरूको दूरी राख्नुहोस् र यो नबिर्सनुहोस् कि उनीहरूले एक शक्तिशाली टोकोको सामना गरिरहेका छन्। बच्चाहरू संग घरपालुवा जनावरको सम्बन्ध एकदम हानि छैन तिनीहरूको प्रकृति विचार गर्दा तिनीहरू केवल तिनीहरूलाई खतरनाक मान्दैनन् न त तिनीहरूको मालिकहरूलाई गर्छन्।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि यी पशुहरू हिंसाको साथ हुर्केका छैनन्, तपाईंले कुनै पनि जंगली चरित्रलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छैन। तिनीहरू आज्ञाकारी हुन सक्छन्, तर तिनीहरूको अविश्वसनीय सुरक्षा प्रवृत्तिलाई सम्मान गर्नै पर्दछ। गोठालो गर्ने कामहरूमध्ये एउटा पनि काकेसियाली गोठालोले बगाललाई आक्रमण गर्ने दुई ब्वाँसाहरूलाई सम्हाल्न सक्छ।
आफ्नो वजन र मांसपेशिहरु को बावजुद, तिनीहरू आश्चर्यजनक र द्रुत छन् र तिनीहरूको भुवाले उनीहरूलाई मौसमबाट मात्र टोक्ने बाट बचाउँदछ, किनकि बाक्लो भएकोले विपक्षीको दाँत छालामा पुग्न गाह्रो हुन्छ।
यो अस्वीकार गर्न सकिदैन कि काकेसियन कुकुर हिंस्रक भएको ख्याति छ तर धेरै जसो प्रतिष्ठान यस जातिको अज्ञानतापूर्वक व्यवहारबाट कमाइएको छ, उसको परिवारको महान संरक्षक। यो के यो सुम्पिएको छ के गर्छ र प्रभावी रूपमा आफ्नो मिशन पूरा गर्दछ।
एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो हो उनिहरुलाई ऊर्जा खर्च गर्न ठाउँ चाहिन्छतिनीहरू शान्त र स्वतन्त्र हुन्छन् र जब यो अन्य दौडहरूसँगको सामाजिकताको कुरा आउँदछ। भन्नुपर्दा, यो शहरी कुकुर होइन किनकि शहर खाली ठाउँहरूमा यसले यसको चरित्रको सानो सकारात्मक पक्षहरू विकास गर्न सक्छ।
यद्यपि यो जनावर एकदम स्वस्थ छ र वंशानुगत रोग छैन भने ठूलो जातका रोगहरूको लागि संवेदनशील छ.
उनीहरूले लिनु पर्ने डाईट र रोगहरूको रोकथाम सम्बन्धी पशु चिकित्सकका निर्देशनहरू पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ हिप, कुहिनो र कार्डियक डिसप्लासिया। पछिल्लो जनावरको खानाले धेरै नै प्रभाव पार्छ, त्यसैले अधिक वजन र मोटाईबाट बच्नु पर्छ।
नियमित हेरचाहको बीचमा, खोपहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन र साथै पनि हुनु हुँदैन यो हप्ताको दुई पटक उपयुक्त उपकरणले ब्रश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। प्रकृतिसँग यसको अन्तरक्रियाको कारण, कुनै पनि प्रकारका परजीवीहरू विरूद्ध सावधान र समयमै सावधानी अपनाउनु पर्छ।
के तपाईंलाई यो कुकुरको जात मन पर्छ? हामीलाई पछ्याउनुहोस् र तपाइँ यस र अन्य जातका बारे बढि जानकारी फेला पार्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुर जात » काकेशियन शेफर्ड कुकुर
म रोल गर्न जाँदैछु। मेरो कुकुर मा एक सानो दुर्घटना भयो र उनको हिप छुनु भयो। हामीले बिभिन्न उपचार गर्‍यौं र ऊ सुधार भयो र उही समयमा ऊ फेरि खराब भयो र अब उसलाई केहि महिना भयो जब मैले उसलाई मास्कोसाना सेसस दिएँ।
यो अविश्वसनीय छ, पशु चिकित्सक पनि चकित भएको छ।
लुर्ड्स सरमिआन्टो भन्यो
हामी धेरै खुसी छौं, तर हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि पशु चिकित्सक जहिले मात्र एक जना हुन्छ जसले पशुलाई के दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न सक्दछ।
Lordes Sarmiento लाई जवाफ दिनुहोस्
हामी धेरै खुसी छौं, तर हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि यो पशु चिकित्सक हुनुपर्दछ जसले हामीलाई सधैं हाम्रो घरपालुवा पशु लिनु पर्छ कि हुँदैन भनेर बताउँछ।
अल्ट्रा लेवुरा के हो र यो केको लागि हो?